အိန္ဒိယအပြာရောင် - Boucheron | HIGH ရတနာအိပ်မက်
ဇူလိုင်လ 9, 2015
အဆိုပါ Maison BOUCHERON အစဉ်အမြဲအိန္ဒိယနှင့်အတူအခွင့်ထူးခံ link ကို, လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ညှို့၏ပြည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ လူးဝစ်ဘွတ်ချာသည် ၁၉၀၉ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးနန်းတက်ခြင်းနှင့်၎င်း၏နန်းတော်များ၏ဗိသုကာလက်ထက် မှစ၍ မြို့ပြများ၏အရောင်များသည် Maison ၏တီထွင်မှုများတွင်လှုံ့ဆော်မှုရင်းမြစ်အဖြစ်အမြဲတမ်းထင်ရှားသောနေရာတစ်ခုရှိသည်။
အမြင့်ရတနာစုဆောင်းမှု Bleu က de Jodhpur ၎င်းသည်အပြာရောင်မြို့တော်အားရဲရင့်စွာရွတ်ဆိုသည့်အနက်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ အလင်း၏ Jeweler မှနေ၏နေ့အိန္ဒိယစီးတီးသို့ပို့ဆောင်သောအရာဖြစ်သည်။
Boucheron သည်သဲများနှင့်စကျင်ကျောက်များကဲ့သို့အလွန်ရဲရင့်သောပစ္စည်းများနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်ထားသည့်သူ၏မြင့်မားခြင်း၏မြင့်မားသောနာယကဖြစ်ခြင်းဂျော့ဖ်ရာ၏မဟာရာရလက်အောက်တွင် ဖန်တီး၍ တီထွင်ခဲ့သောထူးခြားသောစုဆောင်းမှု။ စုဆောင်းခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အထင်ရှားဆုံးကျောက်မျက်ရတနာနှင့် Maison မှပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြသခြင်းဖြစ်သည် Jodhpur လည်ဆွဲBoucheron ၏ပထမဆုံးပြောင်းပြန်လည်ဆွဲသည်မြို့ပြ၏အဖြူနှင့်အပြာရောင်၏ခေတ်ပြိုင်အနေအထားဖြစ်သည်။
Jodhpur လည်ဆွဲသည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်ပုံစံများကို ၁၉၂၈ တွင် Maharaja ၏ Maharaja ကော်မရှင်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် Place Vendômeတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အလွန့်အလွန်အစဉ်အလာအတိုင်းလည်ဆွဲဖြင့်တိုက်ရိုက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။ ရိုးရာ Mughal လက်ဝတ်ရတနာများဖြင့်မှုတ်သွင်းထားပြီး၎င်း၏အချိုးကျဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူရတနာသည်ရှေ့တွင်ရှိသကဲ့သို့နောက်ကျောတွင်လည်းအဖိုးတန်သည်။ သူ၏“ လျှို့ဝှက်ချက်” ဘက်သည်ပိုင်ရှင်၏နှစ်သက်မှုအတွက်သီးသန့်ထားရှိသည်။
Patiala ၏ Maraja ။
Boucheron, Bleu de Jodhpur အမြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။ Jodhpur လည်ဆွဲ။
ဤဆောင်းပါးအစတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Jodhpur လည်ဆွဲကိုဖန်တီးရန်ထူးဆန်း။ ရဲရင့်သောပစ္စည်းများရွေးချယ်ထားသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျိုဒပူပါကျောက်မိုင်းမှထုတ်ယူထားသောတန်ဖိုးအရှိဆုံးနှင့်ရှာဖွေလိုက်သော Makrana စကျင်ကျောက်အကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၆၃၁ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ထားသောအလွန်ထူးဆန်းသော Taj Mahal ကိုတည်ဆောက်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Jodhpur လည်ဆွဲသည်အိန္ဒိယမင်းသား၏ရတနာများ၏ရိုးရာအစဉ်အလာနှင့်အညီပြုလုပ်ထားသည်။ အလှဆင်ထားသောအောက်ဘက်ခြမ်းနှင့်စိန်၏ပုံသဏ္andာန်နှင့်စံပြအချိုးအစားတို့အတွက်ရွေးချယ်ထားသောဗဟိုစိန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Jodhpur လည်ဆွဲ၏အလယ်ဗဟိုစိန် - လုပ်ရာတွင်အတွက် setting
Maison သည်ရတနာကိုပြန်လည်ပြောင်းပြန်ဖြစ်စေရန်ဤအင်္ဂါရပ်တွင်ပါ ၀ င်သည်။ နောက်ဖက်တွင်လှပသောကျောက်မျက်ရတနာများဖန်တီးမှုနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိခြင်းသည် Hands of Light သည်စွဲမှတ်စရာကောင်းပြီးပျော့ပျောင်းသော၊ အလင်းရောင်နှင့်ဝတ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေစေသည့်အပိုင်းအစတစ်ခုပြုလုပ်ရန်စိန်ခေါ်မှုသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
လည်ဆွဲ၏နောက်ဘက်ခြမ်းတွင်အလင်းရောင်သည်တောက်ပပြီးအဖြူနှင့်အဖြူရောင်များ၏စွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းသောဖွဲ့စည်းမှုတွင်ပါဝင်သည် - လက်ရာရတနာအင်းလေးကန်၏လက်ရာမြောက်သောအလုပ်ကထာဝရတည်တံ့သောမှတ်ဥာဏ်နှင့်ဂျိုဒпур၏အကြောင်းကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်း၏မျက်နှာစာသည်စင်ကြယ်သောလိုင်းများကိုတစ်ခုနှင့်၎င်း၏စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောစကျင်ကျောက်နန်းတော်များ၏အရောင်တောက်ပသည်။
Jodhpur လည်ဆွဲ - ရှေ့
Jodhpur လည်ဆွဲ - နောက်ကျော
အိန္ဒိယသည်ခိုင်မာသောအရောင်ခြားနားချက်များကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ၎င်းသည်ဖန်တီးမှု၏အစဖြစ်သည် Lotus ပန်းပွင့် လည်ပင်း။
Maison သည် Garden & Cosmos အနုပညာလှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရပြီး ၁၇ ရာစုမှ ၁၉ ရာစုအတွင်း Maharajas မျိုးဆက်သုံးဆက်အားပြသခဲ့သည်။
Boucheron, Fleur de Lotus လည်ဆွဲ။ Bleu de Jodhpur အမြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။
Jodhpur ၏တော်ဝင်ပန်းချီကားတစ်ချပ်မှလွတ်မြောက်သွားပြီဖြစ်သည့်ပန်းရောင် Tourmaline ကိုအပြင်းအထန်ရရှိခဲ့သည့်ကျောက်ရှာဖွေနေသူ၏အစွမ်းအစတွင်တည်ရှိသည်။ ပြီးတော့ငါတို့မှာ rubellites နဲ့ spessartite garnets တွေရှိတယ်။ အရောင်များကိုပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါသူတို့ကကြာပွင့်ပွင့်သောကြာပွင့်များကိုတုပကြသည်၊ ပန်းချီကားသည်အသက်ပြန်ရှင်လာစေရန်နှင့်၎င်း၏အသံအတိုးအကျယ်အားဖြင့်အမြင့်ဆုံးတွင် Boucheron ၏အရောင်အသွေးစုံလင်စွာဖော်ပြရန်ဗဟို motif ၏အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်စေ့စပ်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သဘာဝတရား၏စစ်မှန်သောအောင်ပွဲ။
Boucheron, Fleur de Lotus လည်ဆွဲ gouache နှင့်၎င်း၏ပန်းရောင် Tourmaline ၏အနီးကပ်။ Bleu de Jodhpur အမြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။
Boucheron Fleur de Lotus လည်ဆွဲ။
Blucheron, gouache Fleur de Lotus လည်ဆွဲ။ Bleu de Jodhpur အမြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။
Fleur de Lotus အစုံသည်ပန်းရောင်ရွှေရောင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်တစ်ခုတည်းသောစုဆောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၎င်းသည်သဲများ၊ မက်မွန် - ရင့်ရင့်ကျောက်တုံးများနှင့်အရောင်အသွေးစုံလင်သောကြောင့်၎င်းသည်အလင်းနှင့်စွမ်းအင်ကိုရရှိစေသည်။
ရဲရင့်သောအရောင်မှသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသန့်ရှင်းသောအလင်းသို့ Menhdi လည်ဆွဲ.
၁၈၇၈ တွင်Frédéric Boucheron သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ထူးခြားသောပန်းချီကားနှင့်အတူသဘာ ၀ ပုလဲများဖြင့်အလှဆင်ထားသောအလှဆင်ထားသောစိန်လက်ကောက်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင် 1878 ခုနှစ်တွင် Kapurthala ၏ Maharaja သည်သူ၏ဗန်းများအတွက် aigrette- အမွေးအဆင်တန်ဆာပြန်တယ်; Paisley ဒီဇိုင်းသည်၎င်း၏အလယ်ဗဟိုတွင် ၂၂ ကာရက်ရှိ briolette ဖြတ်ထားသောစိန်ဖြစ်သည်။
Kapurthala ၏ aigrette- အမွေးအလှဆင်၏ Maharaja
ဤပန်းချီကားသည် Boucheron ၏ဖက်ရှင်လက်ဝတ်ရတနာများ၏အစဉ်အလာအတိုင်းလိုက်ဖက်သည့် Menhdi Necklace ၏လက်ရာရတနာရတနာ၏ဒီဇိုင်း၏မူလအစဖြစ်သည်။
Mendhi အစုသည် Rajput အမျိုးသမီး၏ကြော့ရှင်းလှပမှု၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုနှင့်ဒဏ္legာရီဆန်သောအလှတရားများကိုဂုဏ်ပြုပြီးသတ္တုပျောက်ကွယ်ပုံရသည်။
Boucheron, Menhdi လည်ဆွဲ။ Bleu de Jodhpur အမြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။
သဘာဝအားဖြင့်သဘာဝအရဖြစ်သော Mehndi ၏ကဗျာဆန်ဆန်ထင်ရှားစေရန် Boucheron သည်ထာဝရစိန်ထိုးတံဆိပ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ စိန်ပန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန် Maison ၏လက်မှုပညာရှင်များသည်ကျောက်တုံးများကိုဝိုင်းရံထားသောကျောက်မျက်များဖြင့်ဝိုင်းထားသည်။
Boucheron ၏ Menhdi အစုံသည်အရွယ်အစားအားဖြင့်ရော၊ ၎င်းသည်လည်ဆွဲတစ်ခုသို့အသွင်ပြောင်းထားသောရတနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလည်ပင်းပတ်လည်တွင်ဇာကဲ့သို့သစ်ရွက်များကိုနူးညံ့စွာချထားသည်။
တစ်ချိန်ကအနုပညာနှင့်လက် ၀ တ်ရတနာများ၊ လည်ဆွဲ၊
Bleu de Jodhpur သည်အရောင်များနှင့်အရောင်များသာမကမွေ့လျော်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဤသည်အဘယ်မှာရှိ Nagaur လည်ဆွဲ ထံမှလာ။
Talisman လည်ဆွဲ၊ Nagaur သည်ခိုင်ခံ့သောမြို့၏မှုတ်သွင်းခံ Thar သဲကန္တာရအလယ်၌တည်ရှိသောအံ့ဖွယ်နန်းတော်များကိုကာကွယ်ထားသည်၊ နူးညံ့သောနန်းတော်များကိုကာကွယ်သည်။
Blucheron Nagaur လည်ဆွဲ။ Bleu က de Jodhpur အမြင့်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။
အဖိုးတန်မှတ်ဉာဏ်ကဲ့သို့ပင် Maison သည်သဲကန္တာရမှသဲလုံးအချို့ကို Rajasthan နည်းနည်းဖြင့်ပြန်လည်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာကျောက်ဆောင်ကြည်လင်တဲ့ Nagaur မှာအမြဲတမ်းတည်ရှိပါတယ်။
Boucheron ၏ Creative Studio သည်မဟာမန်းalကရာဇ်မင်းများရွှေခေတ်၏အခမ်းအနားများလည်ပတ်မှုအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်။ Rajput မှူးမတ်များ၏ကြွယ်ဝမှုနှင့်ခမ်းနားထည်ဝါမှုကိုပြသသည်။
Maison သည်ဤဖန်တီးမှုများအတွက်အသုံးပြုသောရိုးရာ motif နှင့်ပစ္စည်းများအထူးသဖြင့်ရွှေ၊ အိန္ဒိယရှိမြင့်မားသောသတ္တု၊ စိန်နှင့်ပုလဲတို့ကိုတောင်းဆိုသည်။ ကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်များပေါင်းထည့်ခြင်းအားဖြင့် Ahhichatragarh citadel ၏ပုံသွင်းပုံကိုရဲရင့်စွာခေတ်မီစေသည်။
Boucheron Nagaur လည်ဆွဲပုံကြမ်းနှင့်စိန်ညှိခြင်း။
Nagaur လည်ဆွဲသည်ရိုးရာပိုးကြိုးချည်နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ပုလဲတစ်လုံးစီကိုကြိုးမျှင်တစ်ခုထဲသို့ထည့်ပြီးရွှေနှင့်စိန်ဆလင်ဒါငယ်များကိုဖြတ်ပြီးတန်းစီထားသည့်လည်ဆွဲ၏ပိုလျှံမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ စိန်တပ်ဆင်ထားသည့်သုံးတွဲပါသည့်လက်စွပ်တစ်ကွင်းသည်၎င်း၏လည်ပင်းကိုလည်ပင်းကိုစုစည်းထားသည်။ ဒီပန်းချီကားကိုသဲကန္တာရရဲ့ပန်းတွေကိုကိုယ်စားပြုတဲ့စိန်ပွင့်ပုံစံစိန်ပွင့်ပုံစံများဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားသည်။ အချိုးကျဖွဲ့စည်းမှုကို2ကာရက်ကူရှီးဖြတ်စိန်အားဖြင့်သင်္ကေတ, ရေအင်္ဂါရပ်ပတ်ပတ်လည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသည်။
ပုလဲတန်းခုနစ်ခုရှိသည်။ ထိုအရေအတွက်သည်အိန္ဒိယတွင်မြင့်မြတ်သောအရာဖြစ်သည်။ Sanskrit (၇) ခု (သို့)“ saptan” သည်ထူးခြားချက်များစွာနှင့်အထူးသဖြင့်အဆုံးမဲ့ဗဟုဝါဒ၏သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဟိန္ဒူစကြဝuniverseာ၏အုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာမြေ ၇ မျက်နှာ၊ သမုဒ္ဒရာ ၇၊ သတိ ၇ ပြည်နယ်၊ သိမ်မွေ့သောစွမ်းအင် ၇ ခုနှင့်ဤအရာအားလုံးကိုအချစ်ဇာတ်လမ်းများထပ်မံထည့်သွင်းရန်အိန္ဒိယတွင်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းသည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေသည်၊ ဒါကြောင့်သူတို့က7ဘဝများအတွက်စည်းလုံးကြလိမ့်မည်။ CC
ပို့သည် ဂလော်ဒီယာ Carletti, အချိန်မှတဆင့်ရတနာ။ အားလုံးပစ္စည်းယဉ်ကျေး Boucheron.
Tags:BleuDeJodhpur • ပြာသော • boucheron • CityOfTheSun • နေခြည် • နေခြည် • ဟဲဟဲ • ဟဲလို • အိႏၵိယ • စိတ်ဝင်စားခြင်း • MarajaOfJodhpur • ပဲရစ် • နေပြည်တော်
မှတ်ချက်0ခုအိန္ဒိယအပြာရောင် - Boucheron လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအနက်"